Hayaddaha ammaanka oo la faray in maalintii aan Muqdisho lagu ... | Universal Somali TV
Hayaddaha ammaanka oo la faray in maalintii aan Muqdisho lagu arki karin meel laga cunteeyo
Xilli maalinta berri ah ay ku beegan tahay Bilashada Bisha Barakeysan ee Ramadan, ayaa laamaha ammaanka dowladda Federalka Somaliya waxaa la faray in Muqdisho aanan lagu arki karin goob laga cunteeyo xilliga maalintii ah.
Xoghayaha guud ee Wasaaradda arrimaha Diinta iyo Awqaafta Sheekh Maxamed Khayrow Xasan, ayaa sheegay iyadoo la ilaalinaayo nidaamka Bisha Barakeysan ee Ramadan, dowladana arrintaasi ay ka duuleyso in aanan la arki Karin goob laga cunteeyo.
Maamulka Gobolka Banaadir iyo masuuliyiinta Hay’addaha ammaanka ayuu furay inay isku diyaariyaan sidii tallaabo sharciga waafaqsan looga qaadi lahaa dadka masoomayaasha ah ee isku dayi doona inay meel laga cunteeyo ka furtaan Magaalada.
“Waxaa mamnuuc ah in iyada oo Ramadaan tahay maqaayadaha maalinkii la furo laguna kariyo cunto, waxaan maamulka gobolka Banaadir iyo maamulada dalka jira ka codsaneynaa in ay la xisaabtamaan dadka falalkaas geysta, way shaqeysan karaan maqaayadaha afurka ilaa saxuurta.” Ayuu yiri Xoghaye Kheyrow.
Ma soomayaal kala duwan ayaa Maalintii qaab dhuumaaleysi ah Magaalada gudaheeda waxa ay uga furtaan goobo qarsoodi ah oo raashinka laga cuno.
Kan-xigaWasiirka Waxbarashada oo shaaciyay ti...
Kan-horeIsgaarsiinta deegaanka Tukaraq oo haw...
40,809,431 unique visits